माधव नेपाललाई ओलीको प्रस्ताव : पार्टी जिम्मा लिने कि माओवादीलाई बुझाउने ? – Dcnepal
माधव नेपाललाई ओलीको प्रस्ताव : पार्टी जिम्मा लिने कि माओवादीलाई बुझाउने ?
प्रकाशित : २०७७ साउन १४ गते १०:३३
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका बरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई शुक्रबार राति गोप्यरुपमा बालुवाटार आउन निम्त्याए।
सशस्त्र प्रहरीको साइरनवाला पछुवा टोली नलिइकन नेता नेपाल बालुवाटार पुगे। एकअर्काका बीच गहिरो तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध बनाइसकेका यी दुई नेताबीच सो दिन भएको कुराले अहिले नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादलाई थप अलमल र उल्झनमा पारेको छ।
त्यही जबजको नाममा उग्रबामपन्थीलाई प्रजातान्त्रिककरण गर्ने काम भयो। आफ्नो जीवनको अधिकांश समय जबजलाई प्रयोगमा विताएका नेता नेपालले जबजको विरोध गर्ने दाहाललाई कसरी साथ देलान्? नेपाललाई ओलीको कार्यशैलीप्रति चित्त बुझेको छैन। तर जबजको विरोधमा दाहाललाई साथ दिन नेपाललाई मुस्किल पर्ने विश्लेषण नेकपाभित्रै शुरु भएको छ।